Aqriso Dhibaatoyinka ay siigada leedahay - Buzuri texts
1. Siigadu waxay dishaa damiirka qofka..
oo ruuxii sameeyaa aanu waxba qaban karin rabana inuu siigaysto kaliya .
2. Boqosho joogta ah … Qofkii siigaystaa badanaa wuxuu daawada aflaamta anshax darrada ah wuuna ka cabsadaa in dadku ay ku arkaan khaas ahaan waalidka sidaas daraadeed had iyo jeer wuxuu ka baqyaa in lagu qabto isgoo daawanaya
3.Cuqdad nafsi …. badanaa qofkii siigaystaa wuu necebyahy is dhaxgalka dadka sidaas daraadeed qofku mar walba wuxuu rabaa inuu kaligii siigaysto qolna isku soo xidho wax kalana qaban kaliya uu siigaysto …
4 biya baxa dag daga ah….. badanaa dhalinyarada siigaystaa waa kuwa fashilma habenka arooskooda oo hore ayay u biya baxaan wayna ku fashilmaan sidii ay u raaligalin lahaayeen xaaskooda
5.xidhiidhka aad ilaahay la leedahy oo burbura ! . Badanaa dadka siigaystaa ma tukadaan 100% sababtoo ah daahir maaha marwalba sidaa daradeed wa laba daran mid dooro ama siigada jooji oo xidhiidhka ilahy aad laleedahy xooji ama siigayso oo shaydaanka ka farxi !
• Run ahaantii dhibaatoyinka siigada maaha kuwa lasoo koobi karo markaa walaakey ama walaashay adoo og dhibatoyinkaa ay leedahy
Originally posted 2021-10-07 12:29:27.
READ ALSO Waligaa Hala Noolaan Haweeneyda Tilmaamahaan Leh Ka Carar Ninyohow